2019-11-26 – မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ | Myanmar Law Center
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃၂ ။)
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၅ ရက်
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်)
၁။ ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေဟုခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“35.(a) any such instrument not being an instrument chargeable withaduty of ten
Kyats only, orabill of exchange or promissory note, shall, subject to all just exception, be admitted in evidence on payment of the duty with which the same is chargeable, or in the case of an instrument insufficiently stamped or the amount required to make up such duty, together withapenalty of five hundred Kyats, or when three times the amount of the proper duty or deficient portion thereof exceeds five hundred Kyats, ofasum equal to three times
such duty or portion;” ၃။ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀၊ ပုဒ်မခွဲ (၁)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (ခ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည်“40.(1)(b) if he is of the opinion that such instrument is chargeable with duty and
is not duly stamped, he shall require the payment of the proper duty or the amount required to make up the same, together withapenalty of five hundred Kyats; or if he thinks fit, an amount not exceeding three times the amount of the proper duty or of the deficient portion thereof,
whether such amount exceeds or falls short of five hundred Kyats;” ၄။ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေတွင်ပါရှိသော “Kyat” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို “Kyats” ဟု လည်းကောင်း၊ နောက်ဆက်တွဲဇယား (၁) တွင်ပါရှိသော “Kyat” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို ငွေပမာဏ ဖော်ပြချက်၏ နောက်သို့ပြောင်းရွှေ့၍ “Kyats” ဟုလည်းကောင်း အသီးသီးအစားထိုးရမည်။